Apartamento con impresonantes vistas. Navia
Igumbi lokulala elimangalisayo, elibanzi kakhulu kwaye lifakwe ngokupheleleyo. Igumbi lokulala lineebhedi ezimbini ze-105 cm, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elinombono omangalisayo kwiintaba. Uxhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Igumbi lokulala elimangalisayo, elibanzi kakhulu kwaye lifakwe ngokupheleleyo. Ikhanya kakhulu kwaye ibanzi, ilungele abantu aba-2, nangona kukho indawo eyaneleyo yokuba abantu aba-4 bakhululeke.
Igumbi lokulala lineebhedi ezimbini ze-105 cm, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi. Kukho i-sofabed kwigumbi lokuhlala enokusetyenziselwa abantu aba-2 ukuba balale ngokufanelekileyo (190x135 cm). Iimbono ezimangalisayo ukusuka ekhitshini kunye negumbi lokuhlala ukuya ezintabeni kunye ne-bay. Uxhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Indlu ibanzi kakhulu kwaye ibekwe kakuhle, ineendawo zokutyela ezininzi, iibhari kunye neevenkile ezikufutshane. Izibuko kunye nolwandle lukwangaphakathi komgama wokuhamba, malunga nemizuzu emi-5.
Zininzi iilali ezothusayo kufutshane njengeLuarca, Tapia de Casariego kunye nezinye ezininzi, ezibonelela ngokhetho oluninzi malunga nokuhamba intaba kunye neminye imisebenzi yezemidlalo, nkqu nokuhamba ngephenyane emnyango wakho kwindawo yeNavia.
Kukho indawo yokupaka engaphantsi komhlaba enokufikelela kwiflethi ngokuphakamisa kunye negumbi lokugcina elinendawo eyaneleyo yeebhayisekile, njl.
I-Galicia ikumgama oziikhilomitha ezingama-20, eneelwandle ezigqwesileyo ngaselunxwemeni lwaseLugo (iilwandle ezineflegi ye-EC eluhlaza kunye neflegi eluhlaza phantse lonke ihlobo).
Kukho indawo eyaneleyo kwigumbi lokugcina iibhayisekile ezimbalwa ukuba ufuna ukucinga ngombono wokubazisa kwaye ukonwabele ukukhwela indalo kulo mmandla mhle.
Lukhetho oluncomekayo kakhulu kwaye iibhayisekile ziya kukhuseleka kwigumbi lokugcina, apho ukufikelela kulo ngesitshixo sakho kwindawo yokupaka engaphantsi komhlaba.
Nangona umnini akalwamkeli naluphi na uxanduva lobusela obunokwenzeka.
4.69 · Izimvo eziyi-29
I am friendly and I like to interact with people. Travelling is one of my main passions. In my free time, I like reading, swimming, mountain-biking and being in contact with nature.
Silapha ukukunceda ngokuhlala kwakho, ngoko ke nceda uqhagamshelane nathi nanini na ngefowuni, umbhalo, i-imeyile, njl. kwaye siya kukuvuyela ukukunceda yonke indlela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- El Espín